Osy lahy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Osy lahy
Tsidiho ny osy tsara indrindra
Nipetraka teo amin'ny toeran'ny toekarena nandritra ny fotoana maharitra ny goat. Ireo biby ireo dia sarobidy amin'ny rononony, satria tsy ny olon-drehetra no manana fahafahana hividy sy hitazonana ombivavy, fa ny osy kosa dia mihena kely ary tsy mitaky toerana be loatra. Kanefa, toy ny omby, ny osilahy dia tonga amin'ny fomba samihafa: ny totozy, ny hena, ny volon'ondry ary ny fifangaroan-javatra.
Ny zozon'ny algine Alpine dia tena tranainy. Nesorina tao amin'ny Kantone any Soisa izy io. Nandritra ny vanim-potoana lava, niaina tany amin'ny kijana alpine ihany ireo osilahy ireo (izany no mahatonga ny etymôlôgika avy amin'ny anarana). Tamin'ny taonjato roampolo tamin'ny taonjato faha-20, dia niparitaka tany amin'ny faritanin'i Italia, Frantsa ary Etazonia, io toerana io, ary raha ny marina, dia nahazo laza malaza izy.
Lamancha - saha goavam-be
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-roampolo, avy amin'ny faritanin'i La Mancha - Espagne, nisy osy tsy notandremana nentina tany Meksika. Efa 1930 taona izy ireo no nipetraka tany Etazonia, Oregon. Nandritra ny taona nanaraka, dia nanomboka niasa ny mpamboly mba hanangon-jaza vaovao. Nandritra ny fiampitàna ny osy fohy niaraka tamin'ny Soisa, ny Nubians ary ny karazana hafa, dia nahazo karazana tsy manan-danja vaovao ny mpahay siansa, izay nantsoina hoe La Mancha.
Ireo rehetra mikasika ny osy Saanen
Ny fikarakarana osy mba hahazoana ronono dia tsy dia malaza loatra eo amin'ny faritra misy antsika, izay noho ny tsy fahampian-tsakafo manondraka betsaka izay manome ronono betsaka. Na izany aza, rehefa nandeha ny fotoana, ny fivoaran'ny fandrosoana ara-tsiansa sy ara-teknolojika ary ny fampidirana ireo tetikady isan-karazany amin'ny fomba fambolena ara-pambolena natsangana tany amin'ny firenena samihafa, dia nanomboka nanararaotra ny biby fiompiny, anisan'izany ny osy, ny mpamboly maoderina, izay tsara sy be ronono.
Nosy goavam-be osy: singa manokana mitazona ao an-trano
Ny osy nosy dia afaka mamokatra ronono iray isan-taona, noho izany, io zary io dia tena sarobidy eo amin'ny zana-boasary. Na dia mpikaroka tena mahay aza dia afaka mitazona azy. Ny tena manan-danja dia ny mahafantatra ireo toetra miavaka amin'ny fikojakojana sy ny sakafon'ny biby. Andao isika hifankahafantatra bebe kokoa amin'ny tsimok'aretina. Ny tantaran'io Voangory io dia natolotr'ireo mpamboly anglisy, avy eo ny anarana ofisialy - ny osy Anglo-Nubienne.
Voangom-bazaha goavam-be any Saanen
Ny solontenam-panjakana goavana indrindra amin'ny osy dia ny Swiss Zaanen, toerana nahaterahany ny tanànan'i Zaanen, any amin'ny Alpes. Ny biby dia samy hafa amin'ny osy hafa noho ny vokatra avo lenta, ny fahavokarana tsara ary ny fampifanarahana tsara amin'ny toetr'andro henjana.
Goatin'ny minisitera Kamerona: fikojakojana sy fikarakarana any an-trano
Ny bibikely dia tsy ireo mponin'ny zoos ihany. Ny tantsaha dia naharitra ela ary nahomby tamin'ny fikarakarana karazana biby toy izany ho an'ny tanjona samihafa: toy ny biby fiompy, ny fizahan-tany amin'ny fambolena, sns. Ao anatin'ity famerenana ity dia hifantoka amin'ny osy am-bavan'i Kamerona sy ny toetrany isika. Ny fampahalalana ankapobeny dia nanjary niely manerana an'izao tontolo izao nandritra ireo taonjato roa lasa.
Ny amboarampeo goavambe tsara indrindra: fomba fikarakarana sy fikojakojana
Ankehitriny, ny fambolena osy amin'ny tranom-bahiny dia tsy malaza noho ny teo aloha. Ary amin'ny fisongadinan'ny karazana maoderina vaovao voavolavola ho an'ny tanjona voafaritra tsara, ny fahazoana ronono, hena, volon'ondry ary ny fijerena ny haben'ny biby, ary manomboka ny mpamboly osy, manaraka fitsipika tsotra amin'ny fitazonana, dia hahazo ronono goavam-be ara-pahasalamana mahasalama.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Osy lahy